Ababoneleli beMveliso kunye neFektri | Abavelisi beTshayina baseChina
Ukuhamba kwePallet, sikwabiza ngokuba zii-racks ezinamandla, xa sifuna iipelethi ukuba zihanjiswe kakuhle kwaye ngokukhawuleza ukusuka kwelinye icala ukuya kolunye icala ngaphandle koncedo lwefoloko kwaye apho kuqala kuyo, kuqala ukuphuma (i-FIFO) kuyadingeka, emva koko ukuhamba kwePallet iya kuba lolona khetho lufanelekileyo kuwe.
I-Stacker crane yokufikelela kwiipelethi kwimizila yokuhamba ngeshutile kumacala omabini. Esi sisombululo sinciphisa iindleko zizonke ngelixa sinika ukugcinwa koxinano oluphezulu, kwaye sisebenzisa ngokupheleleyo indawo yomgangatho kunye nendawo ethe nkqo.
ICarton Flow Rack iqhele ukufakwa kugcino lwezixhobo zomatshini ngokwenza kunye noku-odola inkqubo yokuchola ngamaziko olungiselelo. Inamacandelo amabini: ulwakhiwo lwerack kunye neendlela zokuhamba ezinamandla. Iileyili zokuhamba zibekwe kumgangatho wobunjineli.
Ukuqhuba ngee-racks kwenza ukusetyenziswa okuphezulu kwendawo ethe tyaba kunye ethe nkqo ngokususa iivenkile zomsebenzi weelori ze-forklift phakathi kweeracks, ii-forklifts zingena kwimizila yokugcina i-drive-in racks ukugcina kunye nokufumana iipelethi.
Inkqubo yokuhambisa umbane ngombane yinkqubo yoxinaniso oluphezulu lokunyusa indawo kwindawo yokugcina izinto, apho iirack zibekwa khona kwisisu semoto esikhokelwa yimikhondo esemgangathweni, nangona ubumbeko oluphambili lunokusebenza ngaphandle kweengoma.
Inkqubo yokuphatha isiphekepheke iqulathe ii-shuttle zomsakazo, abathwali, iilifti, izithuthi, ii-racks, inkqubo yolawulo kunye nenkqubo yolawulo lokugcina. Yinkqubo ezenzekelayo ngokupheleleyo yokugcina kakhulu
Inkqubo yokugcina nokubuyisa ezenzekelayo (AS / RS) ihlala inee-racks-bay eziphezulu, i-stacker cranes, ukuhambisa kunye nenkqubo yolawulo lokugcina ehambelana nenkqubo yolawulo lokugcina.
Iipelethi zensimbi ziimveliso ezifanelekileyo zokubuyisela iipelethi zemveli kunye neeplastiki. Ziyilungele imisebenzi ye-forklift kwaye zilungele ukufikelela kwiimpahla. Isetyenziselwa ubukhulu becala ukugcinwa komhlaba okusetyenziselwa izinto ezininzi, ukugcinwa kwishelufa
Inkqubo yokugcina eyiyo inokunyusa indawo yokugcina kwaye igcine ixesha elininzi lokusebenza, Push back rack yinkqubo eyandisa indawo yokugcina ngokunciphisa ii-aisles zeefolokhwe kunye nokugcina ixesha labaqhubi elisebenza kumgaqo we-racking njengakwenzeka kwi-drive-in Iiraki.